Daawo..Kim Jong-un Oo Shacabka Hortiisa Ku Ooyey | Xaqiiqonews
Daawo..Kim Jong-un Oo Shacabka Hortiisa Ku Ooyey
Muuqaal naadir ah in isaga oo kale la arko, Kim Jong-un Maalintii Sabtida aheyd waxa uu dadka hortooda ka jeediyey cudur daar, madaaama uu ku guuldareysatay in uu hagaajiyo daruufta noolaleed ee dalka.
Kim Jong-un ayaa aad hadal ka horjeediyey isku soo bax dad shacab iyo milatari isagu jira ay iskugu yimaadeen,xilli habeen barkii ah waqtiga maxaliga ah ee caasimadda Pyongyang, si loo xuso munaasabadda 75-guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbiga taladahaaya ee shaqaalaha.
Kim, mar uu ka hadlaayey daruufta adaga ee wadanka heysata waxa uu yiri “Waxaan dareemaya xishood, maxaa yeelay abaalkii aad igu laheydeen ma idiin siinin anigoo og kalsoonida weyn ee aad ii heysaan, dadaaladii aan bixiyey waxa ay ku filnaan waayeen in shacabkeena uu ka baxa noolasha adag”.
Waxa uu raaciyey “Intaas waxaa dheer, waxaan dareemaya gallad madaama shacabkeena wili ay bad qabaan ayna caafimaad qabaan”
Sidoo Kale Aqri: Calaamad Lagu Arkay Gacanta Kim Jong-un Oo sheegtay Sababtii Loo Waayey
Kim Waxa uu u muuqday in uu saameeyey hadalkiisa, isaga oo iska siibay oogiyaalaha (muraayadda) oohin darteed, muuqaalka ayaana lagu arkayaa askar iyo shacab ay saameeyeen oohinta iyo hadalka Kim.
Kim Jon-un mar uu ka hadlaayey xaaladda Karoona Fayrus ee dalkiisa, waxa uu tilmaamay in kiisaska cudurkan ee dalkiisa lagu arkay ay yihiin “eber”.
Xuska dhaxdiisa, Kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalo balaastig ah oo aan horay loo arag, waxaa kale oo bandhigga qeyb ka ahaa tijaaabinta gantalada ridada dheer oo labadii sano ee ugu dambeysay uusan dalka tijaabinin.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay, in saaruukh cusub ee W. Kuuriyada soo bandhigtay kaasi oo saarnaa gaari -Xamuulka 11 lugle ah, hadii gantaalkaasi la adeegsado waxa uu noqon doonaa gantal balaastig ah oo qaaradaha iskaga gudba kii ugu weynaa aduunka oo dhan.
“Gantaalkan waa bahal” ayey tiri Melissa Hanham, oo ah maamule ku xigeenka ururka Open Nuclear Network.